Waa Tan Xoriyadda Reer Galbeedka!!! | Xaqiiqonews
Waa Tan Xoriyadda Reer Galbeedka!!!
La yaab ma leh Madaxweynahii ugu horeeyey ee Mareykanka George Washington in uu lahaa ilko gacan ku sameys ah, arintase cajiibka ah waxa ay aheyd in ilkahaasi laga soo siibay adoomihiisa(dadkii ay adoonsan jireen).
Website-ka “Live Science” ayaa sanadkii hore daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay “Ilkaha George Washington maxey ka sameysnaayeen?(alwaax ma aheyne).
Website ayaa beeniyey khurafaad la isla dhaxmaraayey oo ahaa in ilkaha Washington ay ahaayen alwaax,waxa uuna webka xaqiijiyey in Ilkaha ay ahaayeen ilko bani’aadam oo laga soo siibay dadkii la adoonsan jiray.
Sidoo Kale Aqri Dhimashada reer Galbeedka..Buug Cabsi Badan KuAbuuray Reer Galbeedka
Sidaas oo ay tahay Ilaa hadda George ayaa ah calaamad ay ku faanaan Mareykanka, waxaa uuna dhaxda ugu sawiranyahay lacagta Doolarka ee mareykanka.
Sida uu qoray website-ka smithsonianmag, ma ogtahay Thomas Jefferson oo ah Madaxweynihii seddexaad ee Mareykanka in ahaa nin adoonsiga uu arki jiray in ay tahay “suuq laga sameeyo lacago badan”.
smithsonianmag ayaa qoray warbixin dheer oo uu ciwaan uga dhigay “Dhinaca Madow ee Thomas Jefferson” sidaasi oo ay tahay Mareykanka wali waa ay ku faanaan waxa uuna ku sawiranyahay lacagahooda xaanshada ah.
Waddamada Galbeedka oo ugu horeeyo Mareykanka ayaa sheega in ay u dhisanyihiin ama ay u taaganyihiin in ban’daamka oo dhan ay simanyihiin, hase yeeshee xaqiiqdu taasi waa ay ka duwan tahay,
Website-ka “History” waxaa uu qoray maqaal ciwaankiis ahaa “Immisa Madaxweyne Oo Mareykanka soo martaya ayaa adoomo lahaa?”
Website-ka ayaana xaqiijiyey in Afar u qeyb ahl qeyb oo ka mid ah dhamaan madaxdii Mareykanka soo martay ay lahaayeen Adoomo ay adoonsan jireen.